महिला हस्तमैथुनबारे थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्यहरु « Name of Truth News : News Portal in Nepal
प्रकाशित मिति : २०७९, जेष्ठ, ९, सोमबार ०९:०३
एजेन्सी । समाजमा खुला रूपमा कुराकानी नगरिने विषयमध्ये एक ‘हस्तमैथुन’ पनि हो । त्यसमा पनि विशेषगरी ‘महिला हस्तमैथुन’ यस विषयभित्र पर्छ । तर, विशेषज्ञहरू अब यसबारेको सोचाइमा परिवर्तन आउन थालेको बताउँछन् ।
स्टानफोर्ड युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरको महिला यौन चिकित्सा कार्यक्रमका निर्देशक डा. लिह मिल्लेइजरले याहु लाइफलाई बताएकी छन्, “कुनै समय यसबारे खुलेर कुरा गरिँदैन थियो । अहिले बिरामीहरू यसबारे निकै खुलेर कुरा गर्छन् । धर्म र संस्कृतिहरूले हस्तमैथुनलाई स्वीकार्दैन । किनभने यौनकार्यलाई नयाँ प्राणी सृष्टि गर्ने हिसाबले मात्र लिइन्छ । अहिले पनि धेरैले पुरुषहरूले मात्र हस्तमैथुन गर्छन् भन्ने सोच्छन् । तर वास्तवमा महिलाहरूले पनि यो कार्य गर्दछन् । समाज निकै अगाडि बढिसकेको छ । अहिले हामी यौन खेलौना (भाइब्रेटर) बारे पनि खुलेरै कुरा गर्छौं ।”
अमेरिकाको ब्लुमिङटनस्थित इन्डियाना युनिभर्सिटीको यौनिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक डेव्रा हर्बेनिक याहु लाइफलाई भन्छिन्, “केही वर्षयता महिला कलेजका विद्यार्थीहरूले यसबारे खुलेर कुरा गर्न थालेका छन् । तर परम्परागत र अलि बढी रूढीवादी घरमा हुर्केका महिलाहरू भने अझै यसबारे लजाउने गरेका छन् । वयष्क अवस्थामा नपुग्दासम्म केही महिलालाई त आफ्नो योनीबारे पनि राम्रो ज्ञान हुँदैन । विद्यालयहरूमा पनि हस्तमैथुन, यौन सुख, यौनिक अन्वेषण वा चरमोत्कर्षमाथि विरलै सम्बोधन गरिन्छ । त्यसैले यहाँ महिला हस्मैथुनबारे केही चर्चा गरिएको छ ।
१. हस्तमैथुन स्वस्थ बानी
यसबाट पाउने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको आनन्द नै हो । विशेषज्ञहरूले यसबाट केही स्वास्थसम्बन्धी फाइदाहरू जस्तै तनाव मुक्त र राम्रो र गहिरो निँद्रा आउने पनि दाबी गर्छन् । किनभने हस्तमैथुनबाट स्खलित हुँदा सन्चो र आनन्द महशुस गराउने इन्डोर्फिन्स नामक हर्मन निष्कासन हुन्छ ।
मिल्लेइजरले यसबाट योनिमा हुने रक्त संचारमा सुधार आउने र हर्बेनिकले यसलाई ‘सुरक्षित यौन विकल्प’ भएको बताउँछन् ।
२. महिलाहरू तपाईंले सोचेभन्दा धेरै हस्तमैथुन गर्छन्
महिलाहरूले हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने सोचाइ गलत हो । उनीहरू पनि पुरुषहरूलेजस्तै यौनांगहरू छोएर र रगडेर रमाउँछन्, बरु त्यसबारे कम कुरा गर्छन् । हर्बेनिक करिब चारजनामध्ये तीन महिलाले हस्तमैथुन गर्ने गरेको बताउँछिन् ।
सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनमा ४० प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गर्ने गरेको स्वीकारेका थिए भने २२ प्रतिशतले भने जीवनमा कहिल्यै त्यो काम नगरेको बताएका थिए । साथै अध्ययनले ५० प्रतिशत भन्दा बढिले भाइब्रेटर प्रयोग गर्ने गरेको पत्ता लगाएको थियो ।
३. आफ्नो शरीरबारे जान्ने राम्रो उपाय
मिल्लेइजरकाअनुसार यसबाट आफ्नो शरीरको उत्तेजना र आनन्द लिने तरिका वा स्वभाबबारे जानकारी लिन सकिन्छ । साथै महिलाहरूले यसबाट आफ्नो छिटो, ढिलो वा कति तीव्रताले चरमोत्कर्षमा पुग्ने क्षमता छ भन्ने पनि थाहा पाउन सक्छन् । महिलाहरूले कस्तो स्पर्श वा गतिले आफूहरूलाई बढी आनन्द दिन्छन् भन्नेकुरा पनि आफ्ना पार्टनरलाई बताउन सक्छन् । विशेषज्ञहरूले हस्तमैथुनका कारण महिलाहरू बढी कामातुर हुन्छन् भन्ने धारणालाई गलत बताउँछन् ।
४. अति हस्तमैथुन विरलै हुन्छ
हर्बेनिक भन्छिन्, “कसैले विरलै मात्र अति धेरै हस्तमैथुन गर्छन् । यदि त्यस्तो भएमा सम्बन्धित महिलाले त्यस कार्यले आफ्नो दिनचर्यामा बाधा पुगिरहेको थाहा पाउँछन् । यदि चाहिने भन्दा बढी मात्रामा यसमा लिप्त रहँदा उनीहरूको शरीरले नै पीडा महशुस गर्न थाल्छन् । यस्ते समस्या आएमा यौन विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्दछ ।
५. विवाहित र पाको उमेरका पनि संलग्न
हस्तमैथुन केवल युवा र एकल व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । विवाहित महिला तथा पुरुष एवं बुढ्यौलीमा पुगिसकेकाहरूले पनि यो कार्य गर्दछन् । हर्बेनिक भन्छिन्, “हस्तमैथुन मानिसलाई आजीवन उपलब्ध चिज हो । वास्तवमा धेरै पाको उमेरकाले यौन कार्य भन्दा एक्लै यसमा सरिक हुन सजिलो ठान्छन् । यौन आसन, लिंगको उत्तेजना वा सुख्खा योनीको समस्याका कारण पनि यसलाई उनीहरू राम्रो उपाय मान्छन् ।
६. यौन जीवनमा सुधार
सन् २०२० मा ‘जर्नल अफ सेक्स्युअल मेडिसिन’मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हस्तमैथुनका समय सिकेका र अनुभव गरेका उत्तेजनाका तरिकाहरूलाई पार्टनरसँग यौन सम्पर्क गर्दा प्रयोग गर्ने हो भने महिलाहरूले विना कुनै कठिनाइ राम्रो चरमोत्कर्षको सुखानुभूति गर्न सक्छन् । यसले मासिक श्राव बन्द भएका महिलाहरूलाई पनि सघाउँछ ।
मिल्लेइजर भन्छिन्, “रजश्वला रोकिएपछि महिलाको रक्तसंचार गति मन्द हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले स्खलनको महशुस गर्न नसकेको भन्न थाल्छन् । भाइब्रेटरको सहयोग विना स्खलनको स्थितिमा पुग्न नसकेको पनि उनीहरू बताउँछन् । एस्ट्रोजन नामक हर्मनको कमीले यस्तो हुन्छ । त्यतिबेला उनीहरूले आफूलाई बढी उत्तेजित पार्न हस्तमैथुनको सहयोग लिन सक्छन् ।”
७. चर्मोत्कर्षमा पुग्ने एकल उपाय
केही महिलाहरू भन्छन्, “चरमोत्कर्षमा पुग्नै सक्तिनँ । पार्टनरसँगको सहवास र खेलौना प्रयोग गर्दा पनि यो समस्या छ । तर तिनीहरूले आफनो भग्नासा चलाएर भने सन्तुष्टि पाउन सक्छन् । यस्तो समस्या आएको अवस्था हस्तमैथुन एक मात्र उत्कृष्ट उपाय बन्न सक्छ ।”
याहु लाइफबाट ।